ပိတ်ရက်အတွင်းမှာ ဖတ်စရာ (ရွေးချယ်လိုက်ပါ)
6 Apr 2018 . 11:05 AM
ဒီတစ်ပတ်ရုံးပိတ်ရက်မှာတော့ အခရာပရိသတ်တွေအတွက် ကောင်းနိုးရာရာ စာအုပ်တွေကို လမ်းညွှန်ပေးချင်ပါတယ်။ ‘အလိမ္မာ စာမှာရှိ’ ဆိုသလို စာအုပ်စာပေ ဖတ်ရှုသူတွေဟာ အသိပညာအရာမှာ သူများထက် သာလွန်တယ်ဆိုတဲ့ စကားပုံနဲ့အညီ မဖြစ်မနေ ဖတ်ထားသင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၅။ အစားအစာနှင့်ကျန်းမာရေး (မင်းကျော်ဝင်း)
“အစာလည်း ဆေး၊ ဆေးလည်း အစာ” ဆိုတဲ့အတိုင်း အစားအစာကို နည်းလမ်းတကျ စားသုံးတယ်ဆိုတာက ဆေးဝါးမှီဝဲသလိုပါပဲ။ ရှောင်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲလှတဲ့ အစားအစာထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကို ဘယ်လိုရှောင်ကြမလဲ၊ တကယ်လို့ အစာအဆိပ်သင့်ပြီဆိုရင်လည်း ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေ ဘယ်လိုစစ်ထုတ်သင့်တယ်ဆိုတာကို အသေးစိတ်ရေးသားထားပါတယ်။ ဘယ်လိုအစားအသောက်မျိုးတွေဟာ အစာအဆိပ်သင့်တဲ့အတွက် ရှောင်သင့်တာလဲ၊ အစာအဆိပ်သင့်ပြီဆို ဘယ်လိုရှောင်သင့်တာလဲကအစ ရေသားထားတဲ့စာအုပ်မို့ လူတိုင်းဖတ်သင့်တယ်လို့ ဆိုပါရစေ။
၄။ သေရဲ သတ်ရဲ အိုင်အက်စ် (နိုင်ဦး)
ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ အိုင်အက်စ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဟာ အီရတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း မိုဆူးမြို့ထဲမှာ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ပုံ အစပျိုးရေးသားထားပါတယ်။ စာရေးသူ နိုင်ဦးဟာ ISIS တွေရဲ့ လက်ရဲဇတ်ရဲတိုက်ခိုက်ပုံတွေကို စီကာပတ်ကုံးရေးသားထားရုံမက “အိုင်အက်စ်တွေက သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အစုလိုက်အပြုံလိုက် လူသတ်နေတဲ့ကိစ္စမှာ အလ္လာအရှင်မြတ်ကိုပါ ကြံရာပါဖြစ်အောင် လုပ်နေကြတယ်” ဆိုတဲ့ ကယ်လီဖိုနီးယားတက္ကသိုလ် အစ္စလာမ်ဥပဒေပညာရှင်ရဲ့စကားကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ မာတိကာမှာ ပါဝင်တဲ့ “ကျောချမ်းစရာ နိုင်ငံတော်” ၊ “ခါလီဖိတ်ထဲက ဇောက်ထိုးတွေ” ၊ “ ခေါင်းဖြတ်လေ့ကျင့်ခန်း” စတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေကလည်း စာဖတ်သူကို ဖမ်းစားစေပါတယ်။
၃။ အောင်မြင်သူတို့၏ လှေကားထစ်များ (Job Seekers Journal)
အောင်မြင်သူတို့၏ လှေကားထစ်များစာအုပ်ကတော့ Job Seekers Journal မှာ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ အောင်မြင်နေကြတဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကို အပတ်စဉ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို စုစည်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာထွန်းလွင် (Consultant @ Myanmar Climate Change Watch) ၊ ဦးအောင်ချစ်ခင် (Founder @ Strategy First Institute) ၊ ဦးလင်းသိုက်ညွှန့် (CEO @ Myanmar Land’s Institute) ၊ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး တွဲဖက်ပါမောက္ခ) ၊ ဒေါ်မေမြတ်သူ (Deputy MD @ AYA Bank) စတဲ့ အတုယူအားကျဖွယ်ကောင်းတဲ့ နာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ် (၂ဝ)တို့ရဲ့ ဘဝကျင်လည်ဖြတ်သန်းပုံတွေကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့အတွက် လူငယ်တိုင်းဆောင်ထားသင့်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မြင်သူတို့၏ လှေကားထစ်များ (Job Seekers Journal)
၂။ အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အညတရဘဝနိဂုံး (တင်နိုင်တိုး)
တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက် ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ အကျိုးပြုခဲ့ကြသလို အထင်ကရဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက လူမသိသူမသိ ဘဝနိဂုံးချုပ်ခဲ့ကြရတာ ရင်နာစရာကောင်းလှပါတယ်။ ဆရာတင်နိုင်တိုး ရေးသားခဲ့တဲ့ ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ အောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် နေဝင်ချိန်မှာတော့ ချို့ချို့တဲ့တဲ့ ဖြတ်သန်းပြီး ကွယ်လွန်ကြတဲ့သူတွေပါသလို ဘိုးဘွားရိပ်သာမှာပဲ လူမသိသူမသိ ဇာတ်သိမ်းသွားတဲ့ နာမည်ကျော်တွေ အများကြီးပါပါတယ်။ “အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အညတရဘဝနိဂုံး” စာအုပ်ထဲမှာတော့ စာဆိုတော်ဦးကြင်ဥ၊ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ၊ ဦးဖိုးကျား၊ သိပ္ပံမောင်ဝ၊ ပုပ္ပါးဦးကျော်ရင်၊ ဂီတနက်သန်ကိုစေညိန်း၊ စတန့်မင်းသား ကျော်အေးစတဲ့ နာမည်ကျော်တွေရဲ့ ဘဝနေဝင်ချိန်တွေကို အသေးစိတ်ရေးသားထားပါတယ်။
၁။ ဂျက်မားနှင့်အလီဘာဘာ (ဗန်းမော်သိန်းဖေ)
ကဲ . . . ဒီတစ်ပတ်မှာ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးနံပါတ် (၁) ချိတ်နေတဲ့ စာအုပ်ကတော့ ဗန်းမော်သိန်းဖေရဲ့ “ဂျက်မားနှင့်အလီဘာဘာ” စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Alibaba Group ရဲ့ပဲ့ကိုင်ရှင် ဂျက်မား (Jack Ma) ဟာ ဘဝကို အနိုင်မခံအရှုံးမပေး ကြိုးစားတဲ့အကြောင်း၊ ကျောင်းဆရာဘဝမှ နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးထောင်နိုင်တဲ့အထိ မဆုတ်မနစ်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကို အသေးစိတ်ရေးသားထားပါတယ်။
KFC မှာ ၂၄ယောက် အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာ သူတစ်ယောက်တည်းပဲ မခန့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ Harvard ကျောင်းတက်ချင်လို့ လျှောက်တဲ့အကြိမ်တိုင်း အပယ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကအစ ဘဝမှာ ကျရှုံးမှုတွေကို ခါးစီးခံပြီး အောင်မြင်မှုဆီကို လှမ်းလျှောက်လာပုံကို ဖော်ပြထားတဲ့အတွက် လူတိုင်းဖတ်သင့်တဲ့စာအုပ်လို့ပဲ မြင်မိပါတယ်။
ဒီတဈပတျရုံးပိတျရကျမှာတော့ အခရာပရိသတျတှအေတှကျ ကောငျးနိုးရာရာ စာအုပျတှကေို လမျးညှနျပေးခငျြပါတယျ။ ‘အလိမ်မာ စာမှာရှိ’ ဆိုသလို စာအုပျစာပေ ဖတျရှုသူတှဟော အသိပညာအရာမှာ သူမြားထကျ သာလှနျတယျဆိုတဲ့ စကားပုံနဲ့အညီ မဖွဈမနေ ဖတျထားသငျ့တဲ့ စာအုပျကောငျးတှကေို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၅။ အစားအစာနှငျ့ကနျြးမာရေး (မငျးကြျောဝငျး)
“အစာလညျး ဆေး၊ ဆေးလညျး အစာ” ဆိုတဲ့အတိုငျး အစားအစာကို နညျးလမျးတကြ စားသုံးတယျဆိုတာက ဆေးဝါးမှီဝဲသလိုပါပဲ။ ရှောငျနိုငျဖို့ ခကျခဲလှတဲ့ အစားအစာထဲမှာ ပါဝငျတဲ့ အဆိပျအတောကျတှကေို ဘယျလိုရှောငျကွမလဲ၊ တကယျလို့ အစာအဆိပျသငျ့ပွီဆိုရငျလညျး ခန်ဓာကိုယျထဲကနေ ဘယျလိုစဈထုတျသငျ့တယျဆိုတာကို အသေးစိတျရေးသားထားပါတယျ။ ဘယျလိုအစားအသောကျမြိုးတှဟော အစာအဆိပျသငျ့တဲ့အတှကျ ရှောငျသငျ့တာလဲ၊ အစာအဆိပျသငျ့ပွီဆို ဘယျလိုရှောငျသငျ့တာလဲကအစ ရသေားထားတဲ့စာအုပျမို့ လူတိုငျးဖတျသငျ့တယျလို့ ဆိုပါရစေ။
၄။ သရေဲ သတျရဲ အိုငျအကျဈ (နိုငျဦး)
ဒီစာအုပျထဲမှာတော့ အိုငျအကျဈလကျနကျကိုငျအဖှဲ့ဟာ အီရတျနိုငျငံတောငျပိုငျး မိုဆူးမွို့ထဲမှာ အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျပုံ အစပြိုးရေးသားထားပါတယျ။ စာရေးသူ နိုငျဦးဟာ ISIS တှရေဲ့ လကျရဲဇတျရဲတိုကျခိုကျပုံတှကေို စီကာပတျကုံးရေးသားထားရုံမက “အိုငျအကျဈတှကေ သူတို့ရဲ့ရညျရှယျခကျြအတှကျ အစုလိုကျအပွုံလိုကျ လူသတျနတေဲ့ကိစ်စမှာ အလ်လာအရှငျမွတျကိုပါ ကွံရာပါဖွဈအောငျ လုပျနကွေတယျ” ဆိုတဲ့ ကယျလီဖိုနီးယားတက်ကသိုလျ အစ်စလာမျဥပဒပေညာရှငျရဲ့စကားကို ထညျ့သှငျးဖျောပွထားပါသေးတယျ။ မာတိကာမှာ ပါဝငျတဲ့ “ကြောခမျြးစရာ နိုငျငံတျော” ၊ “ခါလီဖိတျထဲက ဇောကျထိုးတှေ” ၊ “ ခေါငျးဖွတျလကေ့ငျြ့ခနျး” စတဲ့ ခေါငျးစဉျတှကေလညျး စာဖတျသူကို ဖမျးစားစပေါတယျ။
၃။ အောငျမွငျသူတို့၏ လှကေားထဈမြား (Job Seekers Journal)
အောငျမွငျသူတို့၏ လှကေားထဈမြားစာအုပျကတော့ Job Seekers Journal မှာ နယျပယျအသီးသီးမှာ အောငျမွငျနကွေတဲ့လူတှရေဲ့အကွောငျးကို အပတျစဉျဖျောပွခဲ့တဲ့ ဆောငျးပါးတှကေို စုစညျးဖျောပွထားတာဖွဈပါတယျ။ ဒေါကျတာထှနျးလှငျ (Consultant @ Myanmar Climate Change Watch) ၊ ဦးအောငျခဈြခငျ (Founder @ Strategy First Institute) ၊ ဦးလငျးသိုကျညှနျ့ (CEO @ Myanmar Land’s Institute) ၊ ဒေါကျတာစိုးလှငျ (သားဖှားမီးယပျအထူးကုဆရာဝနျကွီး တှဲဖကျပါမောက်ခ) ၊ ဒျေါမမွေတျသူ (Deputy MD @ AYA Bank) စတဲ့ အတုယူအားကဖြှယျကောငျးတဲ့ နာမညျကြျောပုဂ်ဂိုလျ (၂ဝ)တို့ရဲ့ ဘဝကငျြလညျဖွတျသနျးပုံတှကေို အသေးစိတျဖျောပွထားတဲ့အတှကျ လူငယျတိုငျးဆောငျထားသငျ့တဲ့ စာအုပျတဈအုပျဖွဈပါတယျ။
အောငျမွငျသူတို့၏ လှကေားထဈမြား (Job Seekers Journal)
၂။ အထငျကရပုဂ်ဂိုလျမြား၏ အညတရဘဝနိဂုံး (တငျနိုငျတိုး)
တိုငျးပွညျနှငျ့လူမြိုးအတှကျ ကိုယျ့နညျးကိုယျ့ဟနျနဲ့ အကြိုးပွုခဲ့ကွသလို အထငျကရဖွဈခဲ့ကွတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှကေ လူမသိသူမသိ ဘဝနိဂုံးခြုပျခဲ့ကွရတာ ရငျနာစရာကောငျးလှပါတယျ။ ဆရာတငျနိုငျတိုး ရေးသားခဲ့တဲ့ ဒီစာအုပျထဲမှာတော့ ငယျရှယျစဉျမှာ အောငျမွငျခဲ့ပမေယျ့ နဝေငျခြိနျမှာတော့ ခြို့ခြို့တဲ့တဲ့ ဖွတျသနျးပွီး ကှယျလှနျကွတဲ့သူတှပေါသလို ဘိုးဘှားရိပျသာမှာပဲ လူမသိသူမသိ ဇာတျသိမျးသှားတဲ့ နာမညျကြျောတှေ အမြားကွီးပါပါတယျ။ “အထငျကရပုဂ်ဂိုလျမြား၏ အညတရဘဝနိဂုံး” စာအုပျထဲမှာတော့ စာဆိုတျောဦးကွငျဥ၊ ဆရာတျောဦးဥတ်တမ၊ ဦးဖိုးကြား၊ သိပ်ပံမောငျဝ၊ ပုပ်ပါးဦးကြျောရငျ၊ ဂီတနကျသနျကိုစညေိနျး၊ စတနျ့မငျးသား ကြျောအေးစတဲ့ နာမညျကြျောတှရေဲ့ ဘဝနဝေငျခြိနျတှကေို အသေးစိတျရေးသားထားပါတယျ။
၁။ ဂကျြမားနှငျ့အလီဘာဘာ (ဗနျးမျောသိနျးဖေ)
ကဲ . . . ဒီတဈပတျမှာ ရောငျးအားအကောငျးဆုံးနံပါတျ (၁) ခြိတျနတေဲ့ စာအုပျကတော့ ဗနျးမျောသိနျးဖရေဲ့ “ဂကျြမားနှငျ့အလီဘာဘာ” စာအုပျပဲဖွဈပါတယျ။ Alibaba Group ရဲ့ပဲ့ကိုငျရှငျ ဂကျြမား (Jack Ma) ဟာ ဘဝကို အနိုငျမခံအရှုံးမပေး ကွိုးစားတဲ့အကွောငျး၊ ကြောငျးဆရာဘဝမှ နညျးပညာကုမ်ပဏီကွီးထောငျနိုငျတဲ့အထိ မဆုတျမနဈကွိုးစားခဲ့တဲ့အကွောငျးတှကေို အသေးစိတျရေးသားထားပါတယျ။
KFC မှာ ၂၄ယောကျ အလုပျလြှောကျတဲ့အခါမှာ သူတဈယောကျတညျးပဲ မခနျ့တယျဆိုတဲ့အကွောငျး၊ Harvard ကြောငျးတကျခငျြလို့ လြှောကျတဲ့အကွိမျတိုငျး အပယျခံရတယျဆိုတဲ့အကွောငျးတှကေအစ ဘဝမှာ ကရြှုံးမှုတှကေို ခါးစီးခံပွီး အောငျမွငျမှုဆီကို လှမျးလြှောကျလာပုံကို ဖျောပွထားတဲ့အတှကျ လူတိုငျးဖတျသငျ့တဲ့စာအုပျလို့ပဲ မွငျမိပါတယျ။